Wasaaradda Boosaha Somaliland oo Daah-furtay Isgaadhsiin Hay’adaha Dawladdu Kula Xidhiidhayaan Adduunka |
Wasaaradda Boosaha Somaliland oo Daah-furtay Isgaadhsiin Hay’adaha Dawladdu Kula Xidhiidhayaan Adduunka
Hargeysa (GNN)- Wasaaradda Boosaha iyo Isgaadhsiinta Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa markii ugu horreysay soo bandhigay mashruuc isgaadhsiineed ay dhammaanba hay’adaha dawladda ee dalku kula xidhiidhi karayaan caalamka oo dhan.
Xaflad soo sameeyey daah-furka habkan casriga ah oo lagu qabtay xarunta Wasaaradda Boosaha iyo Isgaadhsiinta ee magaalada Hargeysa maanta, waxa ka qaybgalay masuuliyiin ka kala socday shirkadaha isgaadhsiinta ee dalka oo tartan u geli doona bixinta internet xawaarihiisu sarreeyo oo mashruucani ku shaqaynayo, saraakiil ka tirsan Baanka Adduunka iyo marti-sharaf kala duwan.
Masuuliyiinta sare ee Boosaha iyo Isgaadhsiinta oo munaasibaddaas ka hadlay, ayaa sheegay in ugu horreyn mashruucan lagu tijaabi doono wasaaradaha Boosaha, Madaxtooyada, Maaliyadda iyo Ganacsiga, kuwaas oo loo diyaariyey adeeg u suurtogelinaya inay hab casri ah maqal iyo muuqaal kula xidhiidhaan wasaaradaha caalamka.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Boosaha iyo Isgaadhsiinta Somaliland Md. Faysal Cali Sheekh Maxamed oo xafladdaas ka hadlay, ayaa si qoto dheer uga warramay muhiimadda iyo faa’iidooyinka ku duugan mashruucan wasaaraddiisu daaha ka rogtay, kaas oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid dalku baahi weyn u qabay.
“Runtii maanta farxad ayay noo tahay inaad nagala soo qaybgashaan munaasibaddan oo ku saabsan furitaanka tartan shirkadaha isgaadhsiintu u geli doonaan afar xafiis oo xidhiidhka xafiisyada dawladda ah, kuwaas oo qalabayntiisa iyo internaydkiisaba si buuxda loogu xidho doono, tartankaasna waxa hagi doonta Wasaaradda Boosta iyo Isgaadhsiinta Somaliland, waxana laga maalgalinaya Baniga Adduunka.”
“Mashruucani waxa uu ka koobnaan doonaa qalab lagu xidhi doono wasaaradaha dawladda, waxana qalabkan ku wada xidhiidhi doona wasaaradaha dalka, waxana ku xidhnaan doona oo iyaguna ku jira internet 10MB ah oo sannad iyo siddeed bilood la bixin doona lacagtiisa. Mashruucani waa bilow, waxaanan rajaynaynaa inuu sii socdo oo qaybaha dhiman ama wasaaradaha inuu dhammaystirmo mustaqbalka dhow.”
Agaasime Faysal waxa uu ballanqaaday inay wasaarad ahaan shirkadaha ku tartamaya hirgelinta mashruucan ugu garsoori doonaan si caddaalad ku dheehan tahay, isla markaana shirkadda hawshaas ka soo bixi karta loo dhiibi doono.
“Waxaannu wasaarad ahaan ku dedaali doonnaa mashruucan iyo hawlaha kale ee aan wadnaaba in ay noqdaan qaar qaranka wax badan u tara. Intan oo keliya wasaaradda shaqadeeda ma aha ee kuwan iyo kuwa kaleba way la leedahay; ha noqdaan shirkadaha isgaadhsiinta ama boosaha, waxaanay diyaar u tahay wasaaraddu inay kala shaqayso, dadaal dheerna ugu jirto sidii ay u kobcin lahayd isgaadhsiinta dalka Somaliland,” ayuu yidhi Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Boosaha iyo Isgaadhsiinta.
Wasiirka Boosaha Somaliland Md. Maxamuud Sheekh Cabdillaahi Cige oo xadhigga ka jaray mashruucan, ayaa sheegay inay shirkadaha isgaadhsiinta ee dalka u qaban doonaan tartan furan oo ku saabsan bixinta internet xawaarihiisu sarreeyo oo uu ku shaqayn doono mashruucan casriga ah oo uu maalgelinayo Baanka Adduunka.
Wasiir Cige waxa uu shirkadaha isgaadhsiinta si rasmi ah ugu furay inay tartamaan qandaraaska mashruucan isgaadhsiineed ee markii ugu horreysay taariikhda u suurtogelinaya hay’adaha dawladda Somaliland inay si toos ah ula xidhiidhaan caalamka.
Wasiirku waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in sida ugu wanaagsan hirgelinta adeeggan layskaga xilsaaro, waxaannu shirkadaha isgaadhsiinta ee tartanka ka qaybgalaya mid walba u bandhigay nooca adeegga internetka ee looga baahan yahay.
“Mashruucani waa mid aad u wanaagsan oo sahlaya in ay xidhiidh toos ah yeeshaan wasaaradaha dawladdu, waxaanan ku dadaalaynaa inaannu markasta isku dayno sidii mashruucaasi u hirgali lahaa oo faa’iido innoogu filan.”
Waxa kaloo munaasibaddaas ka hadlay, Wasiir-ku-xigeenka Boosaha iyo Isgaadhsiinta Md. Cismaan Garaad Soofe iyo Guddoomiyaha Komishanka Qaranka ee ICT Eng. Cali Daahir, kuwaas oo farta ku fiiqay faa’iidooyinka iyo waxtarta mashruucani u yeelan doono xidhiidhka xogaha ay wadaagaan hay’adaha dawladda Somaliland iyo xog-isdhaafsiga caalamka.
Mashruucan oo uu maalgelinayo Baanka Adduunka, isla markaana fulintiisa ku guulaysatay Wasaaradda Boosaha oo muddo badan dadaal dheer ugu jirtay hirgelinta nidaam isgaadhsiineed casri ah oo ay ku wada xidhiidhi karaan wasaaradaha dawladda Somaliland iyo kuwa caalamka.